Home Wararka Muuse Biixi oo la heshiiyay Jabhad si aad ah uga soo horjeeday...
Muuse Biixi oo la heshiiyay Jabhad si aad ah uga soo horjeeday (Aqriso)
Xukuumada Somaliland ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi ayaa ku guuleysatay inay soo xero galiso Jabhada (Xoreynta Awdal) oo dhowaan si weyn ugu hanjabtay xukuumada Muuse, kuna dhawaaqday dagaal ka dhan ah.
Mas’uuliyiinta Somaliland oo gacan ka helaya Aqoonyahan iyo Oday dhaqameed ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa ku guulaysatay inay soo afjarto kooxdaasi, isla markaana ay heshiis wada gaaran.
Jabhada iyo Mas’uuliyiinta oo si wada-jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wada-hadal kadib ay isla qaateen in la soo afjaro xiisada coladeed ee ka dhex taagneed.
Sidoo kale, waxa la isku afgartay in xukuumada Somaliland ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Biixi ay dusha ku qaadato dhamaan tabashooyinka ay qabto Jabhadaasi, isla markaana laga howl-galo sida ugu dhaqsaha badan.
Si kastaba, xukuumada Somaliland ayaa waxa sanadihii u dambeeyay isa soo tarayey Jabhadaha lagaga dhawaaqayey, kuwaasi oo ka soo horjeeda xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi, taasi oo loo aaneynayo tabashooyinka baahsan ee xukuumada Kulmiye iska dhago tirtay.